Podcast သတင်း iPhone | အိုင်ဖုန်းသတင်း
El iPhone News podcast ကို iTunes တွင် download ရယူနိုင်သည် အားလုံးသတိပြုမိရန်သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် iPhone, iPad နှင့် Apple အကြောင်းသတင်း။ Jailbreak နှင့်ပတ်သက်သောခေါင်းစဉ်များနှင့် iOS အတွက်ပြင်ဆင်ချက်များကိုလည်းဆွေးနွေးထားသည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်အရာကမျှသင့်ကိုမလွတ်ကင်းစေရန်တစ်ပတ်၏အကောင်းဆုံး application များနှင့်ဂိမ်းများကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ဘာပိုကောင်းတဲ့လမ်း Actualidad iPhone ရဲ့ Podcast ကိုနားထောင်ပါ iPhone ကိုယ်နှိုက်ကထက်။
13 × 14 ပေါ့တ်ကာစ်- သတင်း၊ မေးခွန်းများနှင့် ထွက်သောအရာများ
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ပေါင်း .
လွှတ်တင်မှုတွေ အားလုံးလုပ်ထားပြီးသားနဲ့ ပထမဆုံးရောက်လာမယ့် သတင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ရှိနေတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ရောက်နေပါ တယ်။
ပေါ့တ်ကာစ် 13 × 13- မျက်နှာပြင်ကွဲနေလား။ ကောင်းပြီ သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ပါ။
Podcast 13 × 12- ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအက်ပ်များ
13 × 11 ပေါ့တ်ကာစ်- Apple တွင် ဆော့ဖ်ဝဲပြဿနာများ။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Apple ရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပြဿနာတွေအကြောင်း ဖောင်းပွနေတဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့ပြီး တစ်ချို့က မပြီးဆုံးခဲ့ဘူး...
13 × 10 ပေါ့တ်ကာစ်- ခရစ္စမတ်သည် Apple တွင် စတင်သည်။
Podcast 13 × 09- တစ်ပတ်အတွက် သတင်းများစွာ
Podcast 13 × 08: MacBook Pro အသစ်၊ HomePod နှင့် Airpods
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
13 × 07 Podcast: Mac ရဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ
လာမယ့်အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်မှာကျင်းပမယ့်ပွဲတွေမှာ Apple ကငါတို့ကိုဘာတွေတင်ပြနိုင်သလဲဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်။ ဒါဟာအလှည့် ...
Podcast 13 × 06: Apple Watch နှင့်အခြားသတင်းများကိုစောင့်နေသည်
ယခုအပတ်တွင်အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်နှင့်သက်တမ်းတိုးထားသော Apple Watch Series7အသစ်ကိုသင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။ အကောင်းတွေရမလား ...